LED Grow Light, တရုတ်နိုင်ငံရှိ LED Strip Light စက်ရုံ - Light On
Light On Technology တွင် LED ကြီးထွားလာသောမီးခွက်များနှင့် LED ချွတ်မီးများစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်အပြည့်အ ၀ ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်ပြည်တွင်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များနှင့်ကိုက်ညီပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်တင်ပို့မှုမတိုင်မီပင်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ပုဂ္ဂလိကမှိုဒီဇိုင်းနှင့်ကျယ်ပြန့် application ကို
Our products are designed with private molding and patents, which differs from the others in the market. This can help you expand your brand.
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်း ဦး စားပေးဖြစ်ပြီးကုန်ကျစရိတ်မှာကျွနုပ်၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသောစျေးနှုန်းသည်တူညီသောသို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားသောအရည်အသွေးလိုအပ်ချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ပျမ်းမျှထက် ၃၀% ပိုမိုနိမ့်သည်။
Shenzhen Light On Technology Co. , Ltd
Light On Technology သည်တီထွင်ဆန်းသစ်သောအဆင့်မြင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး LED အလင်းအရင်းအမြစ်များနှင့်ထုတ်ကုန်များအသုံးပြုခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်သုတေသနပြုခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်ခြင်း။ ဖောက်သည်များအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။ အလွယ်တကူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်မြန်ဆန်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်။ အဓိကအဖွဲ့သည် R&D၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ LED လုပ်ငန်းများကို ၁၀ နှစ်ကျော်ကြာပါဝင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး LED ထုပ်ပိုးခြင်း၊ ဓာတ်ပုံစွမ်းဆောင်ရည်၊ ထုတ်ကုန်အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ တည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းနှင့်စျေးကွက်တို့ကိုနက်နက်နဲနဲနားလည်သည်။ စသည်ဖြင့်